Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Mpamboly fotsy: fitoriana vaovao momba ny fanavakavahana
White Farmers dia mitory noho ny fanavakavahana mivadika mba hisorohana ny 5 lavitrisa dolara amerikana amin'ny fanampiana vonjy maika ho an'ny mainty hoditra, ny teratany amerikana ary ny mpamboly loko hafa.
Niara-niasa tamin'i Kara Brewer Boyd, Fikambanan'ny Mpamboly Indiana Amerikana, ny mpitarika ny zon'olombelona John Boyd sy KJ Skippa Mak Marley, mba hamoaka hira “The Land” mba hanasongadinana ireo fampanantenana rava ara-tantara sy mitohy, fifanarahana tapaka, fanavakavahana ara-poko, ary famoizana tany nijalian'ny teratany. Amerikana sy Black Farmers any Etazonia.
John Boyd, Jr., mpanorina sy filoha, National Black Farmers Association, Black Farmer taranaka faha-4 ao amin'ny faritr'i Mecklenburg, Virginia dia nitory ny US Dept of Agriculture (USDA) ary nahazo Fact of Finding for Racial Discrimination izay nitarika ny 1st USDA Discrimination. avy amin'ny olona iray. Nanohy nanampy an'ireo mpamboly mainty hoditra 10,000 hafa sy vitsy an'isa i Boyd hametraka fitarainana momba ny fanavakavahana, fitoriana ary hetsi-bahoaka manohitra ny USDA. Ny fiompiana no asantsika tranainy indrindra. Tao anatin'ny fahalalahana dia nankamamiana ny fananana tany hiasana ho an'ny tenantsika sy ny fianakaviantsika ary ny fandrosoana ara-poko. “Efa-polo hekitara sy ampondra iray”, no faniriana niraikitra.
Ny fandaharan'asa American Rescue Plan Act (ARPA) an'ny 2021 dia maneho ny fanamaivanana ny tantsaha mainty hoditra izay voatery niady tamin'ny fanavakavahana USDA tamin'ny alàlan'ny fitsarana mba hahazoana fampindramam-bola.